Igadi enkulu yabucala, azikho ezinye iindwendwe, umbono wolwandle
Izinto eziluncedo zale ndlu yimbonakalo yolwandle enomtsalane kunye nepropathi enkulu egcinwe ixhotyiswe ngokupheleleyo kulonwabo lwabantwana kunye nokuphumla kwabazali, kusapho lwakho kuphela, ngaphandle kwezinye iindwendwe ezikufutshane.
Yindawo efanelekileyo yophando; Isiqingatha phakathi kweOpatija entle, iCrikvenica enomtsalane, isiqithi saseKrk, kunye neRijeka. Ziphole elwandle, yonwabele iilwandle kwii-cove ezincinci kunye neentlanzi zokutyela ezimnandi.
I-Family-friendly Apartment Anika, 56 m2, ibekwe kumgangatho ophantsi wendlu. Inendawo yokupaka, indawo yokungena yangasese, kunye nembono entle ye-panoramic ye-Kvarner. Le ndlu iqulathe ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo (isitovu, i-oveni, umatshini wokuhlamba izitya, iketile, ifriji, isikhenkcisi, umatshini wekofu (isihluzo okanye i-espresso), itoaster, enendawo yokutyela eyahlulwe ngeholo kumagumbi amabini okulala aqhagamshelweyo. nge-arc esisangqa, kungekho zingcango phakathi kwazo.
Yindlu yesitudiyo enobuhlobo kusapho kwaye ikhululekile kakhulu kwiintsapho ezinabantwana okanye izalamane, kodwa ayifanelekanga izibini ezibini okanye abantu ababini abangatshatanga abafuna imfihlo.
Kukwakho negumbi lokuhlambela eliphangaleleyo elinebhafu eneshawa, umatshini wokuhlamba kunye nesomisi-enwele. Igumbi lokulala kunye nekhitshi lidibene neendonga ezinkulu zeglasi ukuya kwintendelezo. Udonga olukhulu lweglasi lunamakhethini ashinyeneyo kunye nezivalo zerola. Le ndlu inentsimbi, ibhodi yoku-ayina kunye nesomisi-enwele. Ukuba kuyimfuneko, isitulo esiphezulu singongezwa ngesicelo.
4.90 ·Izimvo eziyi-52
4.90 · Izimvo eziyi-52
Zonke izibonelelo ziyi-3-5 imizuzu ngemoto: iilwandle, iivenkile, iivenkile, isikhululo segesi, ikhemesti, ugqirha, iposi, utshintshiselwano, njl.
Phola elwandle kwaye ujabulele iilwandle kwii-cove ezincinci. Ukufumana iholide esebenzayo, kunye ne-promenade ecaleni kolwandle, umzila wokufaneleka kwi-pinewood, imidlalo yamanzi elunxwemeni okanye utyelele ezinye iiklabhu zezemidlalo ezininzi zaseKostrena.
Kufuphi nendawo ye-archaeological site ye-prehistoric settlement i-Solin kunye ne-Sopalj, apho unokuthatha uhambo kwaye ujabulele indalo kunye ne-panorama enhle.
Ndwendwela zonke izinto ezinomtsalane kule ndawo, kuba iKostrena isembindini weCrikvenica enomtsalane, iOpatija entle, kunye nesixeko saseRijeka. Yonwabele ukutya kwaseMeditera kwindawo yokutyela eKostrena naseRijeka okanye uzame ukuzilungiselela wedwa ukutya okumnandi kwikhitshi lethu lasehlotyeni.
Zimbalwa iindawo eYurophu apho unokutyibiliza khona kusasa kwaye untywizise okanye uhambe elunxwemeni emva kwemini. Omnye wabo nguKostrena, malunga neekhilomitha ezingama-20 ukusuka kwindawo ye-ski yasePlatak. Ngexesha lokushushuluza, unokonwabela umbono wolwandle ukusuka kwimoto yekhebula. Ngexesha lasehlotyeni, unokuya apho kuhambo lwentsapho, ukuze uzihlaziye xa kushushu kakhulu, kwaye ubuye ngokuhlwa ukuya kuqubha ebusuku e-Kostrena kwakhona.
Nazi ezinye iingcebiso malunga nokwenza eKostrena:
-Abo bathanda ukukhwela intaba kunye nokuhamba baya kufumana iindlela ezincinci kwiiplanga zepine ezinombono okufutshane wolwandle.
-Kukho kwakhona uhambo olude lolwandle olune-gastronomy etyebileyo.
-Kwabo bathanda imidlalo yasemanzini, imidlalo yasemanzini yaseKostrena inikezela ngeJet ski, ukutyibilika kwamanzi, ukutyibilika kwe-mono, i-wakeboard, ityhubhu kunye nekauch...
Kukho iiklabhu ezininzi ezikufutshane, ezifana nokuntywila, ukuhamba ngesikhephe, imisebenzi yangaphantsi kwamanzi, njl.
-Abo bathanda impilo-ntle banokuya e-Opatija okanye eCrikvenica.
-Othanda i-hangouts angaya eRijeka (6 km) okanye eOpatija (25 km).
Kukho iTrsat, inxalenye yesixeko saseRijeka, emi kwinduli engaphezulu kweRijeka (iikhilomitha ezisi-7 ukusuka eKostrena) ebonelela ngombono omangalisayo weKvarner yonke. Yindawo efanelekileyo yokuhamba, ukufumana ikofu kunye nokubona indawo.
-I-Astronomical Centre Rijeka ikwiikhilomitha ezi-5 ukusuka kwindlu. Ibandakanya i-planetarium, i-observatory, i-workshop ye-multimedia, i-café, kunye ne-panoramic terrace eluphahleni lwesakhiwo.
Xa ufika umamkeli-ndwendwe uya kudibana nawe phambi kwendlu, akubonise indawo yokupaka kwaye akunike isitshixo. Ukuba ukhetha, unokufumana lonke ulwazi ngomyalezo: siphi isitshixo kunye nazo zonke iinkcukacha malunga nefulethi. Ukuba unqwenela, umamkeli-ndwendwe uya kukwazisa ngovuyo ngazo zonke izinto ezinomtsalane kwindawo leyo.
Xa ufika umamkeli-ndwendwe uya kudibana nawe phambi kwendlu, akubonise indawo yokupaka kwaye akunike isitshixo. Ukuba ukhetha, unokufumana lonke ulwazi ngomyalezo: siphi isitshixo…